Botswana opposition condemns "assassination attempt" on Mnangagwa – Report Focus
Botswana opposition condemns “assassination attempt” on Mnangagwa
The Botswana National Front (BNF) is concerned by the recent media reports of the alleged “assassination attempt” on Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa at his party’s political campaign trail rally in Bulawayo.
Botswana National Front, the country’s oldest opposition political party on Tuesday has condemned the assassination attempt on Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa.
“This is a serious incident which could spiral into a violent war if not expeditiously managed, especially that past Zimbabwe national elections have been characterized by violent differences,” said Justin Hunyepa, BNF Secretary for Information and Publicity
Hunyepa said BNF wants Southern African Development Community (SADC) and African Union to conduct a thorough and sound investigation on what transpired so as to protect and prevent the country from plunging into a possible life threatening civil war.
“A civil war in Zimbabwe will definitely plunge the country further deep into socio-economic crises that will take decades for it to recover. Political violence is unwelcome in the already economically decimated Zimbabwe,” Hunyepa said.
BNF joins other opposition political parties in the region that have condemned the incident in Zimbabwe.